» Ibsa Ijjanno Kominiitii Islama Oromo Edmonton ---- Gadaa.com Oduu – News
Ibsa Ijjanno Kominiitii Islama Oromo Edmonton
May 15, 2012 at 6:28 am · Gadaa.com Caamsaa 15, 2012
Akkamu hedduu kennya hubannutti ummata Empaayara Itopia keessa qophatu harki guddaan Islaama. Haa tahuu malee, hamma yeroo dhihootti islamummaan madda kabajaa fi ulfinaa osoo hin tahin akka asxaa salphinaa fi gad aantummaatti ilaalamaa turee jira.
Kessaahuu, hamma bara 1930-mootatti islaamummaan akka amantii ummata itoopiaa hin tahin fi Empaayarattiin diddibboo kiristianaa jedhamtee akka yaamamtuu fi “Isalaamota” (Muslimoota) itopia jechuu caalaa Islaamota itopia keessa qubatan jedhamanii akka ibasamaa turan seenaan nu yaadachiisa.
– Full Statement (Ayyaantuu.com)
2 Comments	jalatoo sabaa said,
oboleeyan keenya kan oromo,ibsi keeysan isa yaroon wajiin deemu waan taheef heduu nama gamachiisa. Heduu haasawura waan xiqoo bareeduu yoo hojane ira gaarii waan taheef wani isin gootan bareedadha. Wari biraleen fakii kana yoo fudhatan gaariidha jabaadha.
May 25, 2012 @ 3:26 pm
Ibsa barbaachisaa ta’e dha. Komuniitii oromoo kana hedduun galateeffadha. Koominitota kabiraa irraas sochii walfakkaatu eegna.